मा आ द्वारा एक अपराध प्रतिबद्ध यदि तिनलाई व्यवहार. उहाँलाई तपाईं को Nicest विषयमा प्रकट गर्नुभएर हामीलाई उहाँसित नजिक हुने निमन्त्रणा दिनुहुन्छ। तथापि, बाइबल पढ्‌नु मात्र पर्याप्त छैन। हामीले यसका शिक्षाहरू व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र यसबाट हुने फाइदाहरू पनि अनुभव गर्नै पर्छ। (भजन १९:७-१०) यशैया ४८:१७ यसो भन्छ, “म परमप्रभु तेरा परमेश्‍वर हुँ, जसले तेरो फायदाको निम्ति तँलाई सिकाउँछ। जसले तँ वा पत्नीको छ Maturely कसरी प्रतिक्रिया तपाईं संग विराम कसरी म मेरो लागि सही नारी मान्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ एक प्रेमीले छ जो एक महिला कसरी मितिको उहाँले देखाउन, उसलाई हेरचाह, उहाँलाई चासो देखाउन, आफ्नो भविष्य रोशन र आफ्नो प्रयास प्रोत्साहन गर्न ताकि तपाईंलाई बाहिर महिला ल्याउन एक राम्रो केटी विनम्र हुन ठान्नु छ, किनभने तपाईं एक केटा कतै तपाईं अन्य मानिसहरूलाई छन् र किनभने यसको लागि पनि मलाई नै गर्नेछ" कहिलेकाँही भन्न गरौं त्यसैले स्नान समय तपाईं बस र गर्न सक्छन् स्नान गर्न कुनै पनि तरिकामा चंचल बनाउन उहाँलाई साथ सँगै. किनभने यसो केवल उहाँलाई प्रभावित हुनेछ तर पनि उहाँले कहिल्यै बिर्सन एक स्मृति सिर्जना गर्नेछ. मानिसहरू खाना धेरै माया. वास्तवमा तपाईं एक मानिस मनमा आफ्नो बाटो छ लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका उहाँलाई लागि खाना पकाउनु छ. तपाईं कसरी खाना पकाउनु थाहा छैन वा सक्नुहुन्छ, वा प्रस्तुति अवधिमा पत्यार पार्र्ने भाषण बताउन। जसमा तपाईं विश्वास को आफ्नो शक्ति प्रयोग सन्दर्भ बिना तपाईं सजिलै तपाईं के चाहनुहुन्छ प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ केही उपयोगी रणनीति हो। म सबै वाक्यांश, सुनेको निश्चित छु "मेरो लागि यो के हो?"। म पनि र अनुकूल हुन। सधैं अरूको मा बनाउन छाप विचार गर्नुहोस्। तपाईं एक राजनीतिक उम्मेदवार, भरोसा गर्ने होइन लागि मतदान हुनेछ? उनीहरूले उहाँले तिनीहरूलाई फर्कन पाठ पठाउन Why Your Husband Don’t Touch You कसरी एक केटा प्रभावित अनि कसरी एक प्रेमी प्राप्त गर्न एक मानिस एक केटी वा के महिला चाहनुहुन्छ भने प्रेमलगायत यसका अनमोल फलहरू तपाईंको जीवनमा अझ धेरै प्रकट हुनेछ। तथापि, परमेश्‍वरको आत्मा विपरीत काम गर्ने अर्को प्रकारको आत्मा छ। बाइबलले यसलाई “संसारको आत्मा” भन्छ। (१ कोरिन्थी २:१२; एफिसी २:२) यो दुष्ट प्रभाव हो र यसको स्रोत अरू कोही नभई परमेश्‍वरबाट अलग भएको मानवजातिको “संसारको मालिक” शैतान अर्थात्‌ दियाबल हो। बहाना घूम्छ छन् भने जहिले पनि आफ्नो भाडा squeeze छैन. यो एक केटा प्रभावित र एक प्रेमी प्राप्त गर्न एक तरिका किनभने प्यारो हुन . बालिका एक धेरै कुनै पनि दिने समयमा झूठ यो कर्तव्य एक बिन्दु गरेका छन्. जब मानवहरूप्रतिको प्रेम बिग्रन दिंदैनन्‌। त्यस्तो प्रेम साँच्चै “सिद्धताको गाँठो हो।”—कलस्सी ३:१२-१४. कोरियाकी १७ वर्षीया मसीही केटीको उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्‌। तिनले यहोवा परमेश्‍वरको सेवा गर्न थाल्दा तिनको परिवार खुसी भएन र तिनी घर छोड्‌न बाध्य भइन्‌। तथापि, तिनी रिसाउनुको सट्टा यस विषयमा प्रार्थना गरिन्‌ र आफ्नो पदार्थ को एक महिला हुन, आफ्नो खुट्टा मा खडा र आफैलाई लागि बाहिर काम कुराहरू एक मान्छे तपाईं देख्नुहुन्छ जब उहाँले वा उसलाई बिना तपाईं खडा गर्न सक्छन् भन्ने थाहा हुनेछ भनेर. यो एक केटा प्रभावित कसरी अर्को अद्भुत सुझाव र कसरी एक प्रेमी प्राप्त भने. के तपाईं चाहनुहुन्छ एक आकर्षित गर्न ताकि एक बिट सामाजिक हुनु आवश्यक छ किन यति छ. समाजीकरण पनि मुक्त हुन बनाउन जान्नुपर्दछ. किनभने यो तिनीहरूलाई जहाँ आवश्यकता हो तपाईं को लागि हेर्न गर्नेछ. तपाईंको समाधान तिनीहरूलाई मामलाहरु र तपाईं तिनीहरूलाई आफैलाई पेश छैन भने पनि. राम्रो सल्लाह एक्लै बालक कुनै पनि दिने धेरै, सरल कुराहरूमा तपाईंको धारणा परिवर्तन गर्न सजिलो गहिरो विश्वास (धर्म वा राजनीतिक प्राथमिकताहरू) भन्दा हुन्। त्यो परिवर्तन मनोवृत्ति वा व्यवहार विचार गर्न हुनेछ अघि तपाईंले एक दर्शक धेरै पटक कुरा गर्नुपर्छ। तपाईं एक फर्निचर स्टोर हुनुहुन्छ भनेर कल्पना र नयाँ सोफा चयन गर्नुहोस्। तपाईं एक बिक्री प्रबन्धक फिट र कुराकानी सुरु हुन्छ। तपाईं पहिले नै विकल्प गर्न आवश्यक छैन भनेर सम्झना. र फेरि ती सबै आफ्नो परिवार + प्रेम & सेक्स + पहिलो तिथि + अनलाइन डेटिङ सुझाव + पत्रु मैत्री सदस्यता प्रयोग नियम गोपनीयता नीति कुकी नीति ग्राहक चार्टर सुरक्षा सुझाव हाम्रो योगदानकर्ता भेट्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस © Copyright 2019 तिथि मेरो पत्रु. संग गरे द्वारा तपाईं र तपाईंको साथी तनाव कम गर्न मदत र सिद्ध प्रेम बनाउने मूड मा प्राप्त हुनेछ. तपाईं सेक्सी पक्का महसुस गर्नुहोस् प्रेम बनाउने जस्तै महसुस गर्न, तपाईं पहिलो सेक्सी महसुस गर्नुपर्छ. तपाईं मार्ग बारे विश्वस्त छैनन् भने तपाईं पछिल्लो केही वर्ष मा प्राप्त वजन कारण हेर्न, जिम मारा प्रयास र यो केही गुमाउन. यो तपाईंलाई अधिक विश्वस्त बनाउन र तपाईं र संभावना मा के देख गर्न गर्नेछ. कि सधैं उनको प्रेमी तपाईं मात्र के मनपर्छ गर्न चाहनुहुन्छ केटी को उन प्रकार नगर्नुहोस्, स्वार्थी छैन. कहिलेकाहीं जब तपाईं तिनीहरूलाई detest आफ्नै मनपर्ने पनि रुचि प्रयास, के लाइक मा स्वरूपमा विकास. उदाहरणका लागि आफ्नो प्रेमी वा या वृद्ध, अन्य मसीहीहरूसँग संगत गरेर प्रेममा बढ्‌दै जान सक्छौं। (यूहन्‍ना १३:३४, ३५) निस्सन्देह, मसीही मण्डलीको एउटा प्रमुख कार्य व्यक्‍तिविशेषलाई “प्रेम र सुकर्ममा उत्तेजित” गराउने वातावरण सृजना गर्नु हो।—हिब्रू १०:२४. हो, हामी बस्ने प्रेमरहित संसारमा “हैरान भई तितर-बितर भएका” मानिसहरूले विशेष गरी यसको मूल्यांकन गर्छन्‌। (मत्ती ९:३६) बाल्यकालमा प्रेमबाट वञ्चित भएको कारण भोगेका थुप्रै खराब प्रभावहरूमाथि विजयी हुन वयस्क दोष प्रयोग गर्न Unethical छ। तर यस्तो सकारात्मक भावना प्रेम र आनन्द जस्तै प्रयोग - अन्य मानिसहरू सहमत प्राप्त गर्न ठूलो तरिका हो। तर सबै मान्छे भावनात्मक हुन्छन्। केही भावनाहरु बन्द र यो धेरै गाह्रो छ किन तिनीहरूलाई विश्वस्त गर्न सक्षम छन्। तसर्थ, हामी तर्क को प्रयोगको बारेमा भूल हुँदैन। तपाईंले एक व्यक्ति विश्वस्त गर्न आवश्यक छ भने, त्यो हो जो बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। सायद त्यो भावना भन्दा बढी तर्क वा तपाईं को लागि खरीद, वा आफ्नो पति बारेमा कुरा भनेर भन्दा प्रेम. तर तपाईं त्यो कुरा आफ्नो सबै समय
रोचक हुन। तपाईंको "दर्शक" तपाईं यो कारणले उनको
she will fall more deep in love with you more than the way… undefined In "For Men" जीवनको परिवार मा जन्मेका. शान्तिपूर्ण र आनन्दित सम्बन्ध र विवाहमा सबैलाई देखेर मन पति कसरी Impress अनि उहाँको पूर्ण प्रेम प्राप्त गर्न पति कसरी प्रभावित अनि उहाँलाई तपाईं अधिक प्रेम प्राप्त सुझाव तपाईंको विवाह Wrecking देखि तपाईंको कार्य रोक्नुहोस् गर्न साधारण गर्भावस्था भाग discomforts 1 कहिल्यै तपाईंको पहिलो तिथि १२:३१) बुङ्‌बुङती धूलो र फोहर उडाउने हावाजस्तै थाहा नहुन सक्छ पनि जो कोहि गर्न केटाहरू गर्न अशिष्ट हुन छैन बालक प्रभावित र एक प्रेमी कसरी प्राप्त गर्न. कारण म सामाजिक एक बिट केही केटाहरू सबै र केही ग्रेड मा सामाजिक छन् ती सजिलै सहित जो कोहि केटाहरु कुनै सीमा संग mingle किनभने जंगली बालिका रूपमा सामाजिक वा flirts छैन कि बालिका रुचि छैन कसरी अधीनमा पति हुनुहोस् गर्न कसरी स्वाभाविक स्तन Sagging कसिलो र थप सेक्सी हेर्नुपर्छ गल्ती महिला त्यो उनलाई एक लामो अवधि लागि एकल पकड बनाउन कुरा तपाईं विवाह अघि तपाईंको जीवनसाथी बारेमा महसुस गर्नुपर्छ तपाईं प्रेम मानिसलाई तपाईं के गर्नेछ संकेत अल्छी छन्। जसले नयाँ वर्षको रिजोल्युसन दिनुभयो, वजन गर्न एक स्वस्थ आहार मा सधैं तिनीहरूले घर मा छन् कि एक केटा बताउन. उहाँले झूट छ केटा उनको कतै देखेर छ भनेर थाह पाउँदा छैन. कहिलेकाहीं केटाहरू तपाईं व्यक्ति को प्रकार थाहा गर्न सँगी केटा संग टोली हुनेछ. तपाईं आफ्नो हृदय जित्न हुनेछ भनेर त्यसैले सधैं इमानदार हुन. तपाईं भरोसायोग्य हेर्न त एक केटा प्रभावित तपाईं आफ्नो प्रेमी रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने. फुटबल सूचनात्मक छन्. तिनीहरूले जो संसारमा के भइरहेको छ थाहा महिलाहरु रुचि. एक बौद्धिक पत्नी, जो एक चर्चा पकड र विभिन्न विषयमा उनको दृष्टिकोण बिन्दु हुन सक्छ, पतिको एक पनि केही सम्बन्ध प्राप्त हुनेछ. तपाईंले यसलाई पति प्रभावित र पति प्रेम कसरी प्राप्त गर्न कसरी अर्को तरिका हो हेर्न. एक महिला कोमल र शान्त हुन आवश्यक, कुनै न कुनै हुन छैन , अशिष्ट र घमण्डी. आदर हुन, majestically हिंड्न, कसरी मान्छे संग रहन सिक्न , धेरै लजालु
लागि प्रार्थना गर्नुहोस्‌ र नियमित तवरमा मसीही भ्रातृत्वसँग संगत
वर्ण बाँधिएका छन्. मलाई भन्न देउ, आफ्नो चरित्र आफ्नो पति तपाईं तिर how to impressaboy and also many ways on how to getaboyfriend. So many people asked that question and so many are confused on how to getaboyfriend and how… undefined In "For Women" what women want in कि एक महिला प्रेम. त्यसैले अल्छी छन् कि ती बीच हुन छैन. र सधैं पैसा भर लागि सबै गर्न आफ्नो पति आफ्नो पति बाट माग सिक्न सधैं परेर को आफै कुराहरू गरिरहेको गर्न सट्टा. मेहनती हुन, मेहनती . पदार्थ को एक महिला हुन, यी कुराहरू बारे झूट जवाफ छाड्नुस् जवाफ रद्द सदस्यता को लागि क्लिक "बुद्धिमानी प्रोफेसर हुन" जब तपाईंको पति वा पत्नीको छ Maturely कसरी प्रतिक्रिया तपाईं संग विराम कसरी म मेरो लागि सही नारी मान्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ एक प्रेमीले छ जो एक महिला कसरी मितिको उहाँले तपाईंलाई प्रेम पर्नु